Maxaa Cusub ee Cusub 2010 - Geofumadas
Febraayo, 2009 AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, Video
Tani waa magaca uu Heidi ku siiyey dib-u-eegistaan ​​ee AutoCAD, kaliya hal sano kadib markii aanu wuxuu ka hadli doonaa AutoCAD 2009. Ka imid anigaa oo sanado ah 17 daawashada sanadki cusub, waxaa laga yaabaa in aad fiirsato. Dhowr ka mid ah waa kuwa aan haysanay koorsada bisha Oktoobar, Waxaan ku dhuftey xaqiiqda ah in muuqaalka daboolka oo metelaya noocan 2010 oo loo yaqaan "Gator", wuxuu u egyahay "Qeybaha Guud" ... waxa ay iigu muuqataa.
Wareejinta shatiga, waxaa suurtogal ah in laysinka ku wareejiyo xiriirka websaydka, hal mishiinka ilaa mid kale, si aad u isticmaali karto midka aad ku leedahay xafiiskaaga, mashiinka gurigaaga, iyo laptop-ka marka aad safreyso. Waxaan u maleynayaa inay tahay arrin aad u fiican, isla mar ahaantaana waxaan xallin karaa isticmaalka liisanka rukunka ee xafiis, sidaas darteed waxay u isticmaali karaan mashiino kala duwan (maaha isku mar). Waxay u shaqaysaa iyada oo la adeegsanayo shatiga ruqsadda ee AutoDesk halka ruqsadda loo baahan yahay in la dhoofiyo, waxaa laga sii daayaa mashiinka waxana la heli karaa in dib loogu soo celiyo isla mashiinka ama mid kale.
Adeegyada daabacaadda iyo internetka
Ku dhoofi PDF, U dir faafaahinta pdf, kordhinta sifooyinka lakala diri karo, kantarool badan oo ah waxa aan rabno inaan u dirno.
Waxaad wacdaa tixraaca PDF, tani waa mid ka mid ah dadaalka ugu fiican, taasina waxa ay aheyd meesha ugu sareysa ee liiska doonista; waxay qeexaysaa in faylka pdf loo soo gudbin karo sida dwg, dgn ama dwf, waxaa la fahamsan yahay in ay sii wadi doonto jahawareerka iyo xitaa lagu xiri karaa joomatari ee ku jira pdf kan.
Raadso Bilaash, Waxaad heli kartaa oo u adeegi kartaa faylasha adigoo ka faa'iideysanaya xiriirka webka.
Taageerada STL, hadda shey 3D ayaa lagu daabici karaa taageerada ay qaar ka mid ah adeegyada internetka u baahan yihiin, sidoo kale iyada oo loo marayo eTransmit.
Sawireynta khariidadda, waa magaca lagu siiyay nooca qaabeynta ee la siin karo geometry, tusaale ahaan, in trapezoid uu yahay nus dhererkiisa; habkan waxaa loo isticmaali karaa marka la shaqeynayo qayb ka mid ah darbiga xajinta, oo kaliya sawirka dherer ahaan waxaan abuuri karnaa joomatari.
Noocyada firaaqada, qiyaasta dhabta ah ee xaqiiqda ah waxa ay matalayaan. Waxay micnaheedu tahay in aad siin kartid guryaha dhismooyinka, sidaad ku dhihi kartid, tani waa albaab qorshe ah, waxaad mar walba yeelan doontaa 10 cm xuubka labadaba iyo labada dhinacba, laakiin Ho de laquete way kala duwanaan kartaa, iyo sidoo kale ballaca derbiga. Sidaan waxaan u isticmaali karnaa isla dhismaha noocyada kala duwan ee albaabada iyadoo loo eegayo miiska sifaha.
Achurado, waxay awood u siinayaan inay awood u yeeshaan, sida qalabka aan xariirka ahayn ee la diyaarin karo laguna kordhin lahaa xadka.
Shaqada 3D iyo aragtida
Nooca dijitaalka ah ee habboon, Heidi wuxuu yidhi, qaabaynta dusha sare ayaa loo naqshadeeyn karaa, marka marka sawir laga qaado, waxay u muuqan doontaa mid dhab ah. Taas waxaan u maleynayaa in ay si adag u shaqeynayeen si ay u hagaajiyaan xawaaraha wax soo saarka, haddii aysan ahayn, waxay cuni doontaa ilo badan oo ka badan inta aan hore u laheyn. Inkasta oo loogu talagalay naqshadaha dhamaadka farsamada, midabka midabkiisu uu yahay, wuxuu u muuqdaa mid wanaagsan mana u baahna xasuusin badan.
Dhibaatooyinka 3D, hadda waxaad xakamayn kartaa aragtida shayga saddexda cabbir la'aan iyada oo aan loo qeexin qulqul-xoqin. Tani waxay siisaa shaqeyn weyn Wii koontaroolidda in ay noqdaan dad caan ah, taas oo muujineysa in mashiinka saqafka la cadaadiyay la abuuri karo sida la sameeyo Google Earth.
Xulashada walxaha hoose, hadda waa shay 3D koox ahaan, sida cube ayaa loo dooran karaa wajiyadooda shakhsi ahaaneed; iyo sidoo kale markaad taabato walxaha ku yaala Corel Draw, inkasta oo ay yihiin kooxo, shaqeyntu waxay timaadaa filtar laakiin waxaan rajeynayaa in baaskiilka ctrl la dooran karo oo guryahooda ay isbeddelaan iyaga oo aan ka faa'iideysan.
Dib u soo noqo sawir, weyn!, waxaa loo rogi karaa ilaalinta jihada sawir-qaadashada ama u rogidda sidoo kale.
Horudhac tusaalaha, sida aad ka arki kartaa qaabka, hadda waxaad sidoo kale modeli kartaa.
Qalabka xaashida, xakamaynta weyn ee xaashida iyo jadwalka la daabici doono.
Meelaha codsiga, geeska bidix ee sare wuxuu ku dari doonaa ikhtiyaarka ah inuu awood u yeesho ama uumi-geliyo qalabka qashinka, si loogu daboolo kuwa aan weli ku jirin qaabka Xafiiska 2007 inkastoo aysan ku habbooneyn isticmaalka mowqifka kormeeraha.
Ribbon, A la mara wuu jecel yahay, laakiin waydiistay in la jilicsanaado si loo helo qalab, sidaas daraadeed isafgaradkeedu waa inuu noqdo mid la maamuli karo.
Gaaritaanka Gaaritaanka Degdegga ah, Sida muuqata ka weyn oo la mid ah waxa ay dadku la wadaagaan codsiyada Windows kuwaas oo calaamadiyay qaabab caadi ahaan loo aqbalo. Waan arki doonaa haddii ay tahay mid fudud sida "u dir guddiga".
tixraacyada, hadda, markaad wacdid tixraac, Ribbon / haray wuxuu leeyahay koontarool lagama maarmaanka ah si loo qeexo sifooyinka feylka ah ee lagu dhajiyo, waa dwg, dgn, dwf, raster ama pdf.
Samaynta iyo qoraalka
Multileader , Hadda waxaa suurtogal ah in la calaameeyo tilmaamo ka mid ah illaa dhowr ah, taas oo ah, oo leh hal qoraal ah dhawr falliiq oo tilmaamaya, oo la xidhiidha koorsada.
Qoraalka cabbirka, hadda waa la xakameyn karo, waxaad si toos ah u dhaqaajineysaa meesha aad rabto inaad dhigto iyada oo aan wax badan soo noqon.
Raadi oo beddel, hadda waxaa suurtogal ah in lagu muujiyo qoraallada ka yimaada raadinta, macquul ahaan miiska, iyo awood u leh inay soo jiitaan dhammaan xulashada.
Mtext, hadda qoraalka badan ayaa lagu xakumi karaa xakamaynta xakamaynta 8 iyada oon dilin nolosha.
Qorista, hadda waxaa ka mid ah qashin iyo dib u noqo haddii aad dhacdo qalad, Hallelujah!
Qaababka Aqoonta Cusub, si aad u ogaatid billowgii of this version ... waxaan u baahan doonaa inaan ku noolaan leh amarka this annoying sanadka oo dhan.
CUIx, txus ogaan doonaa waxa macneheedu yahay, sida muuqata waa mid cusub ilaa hadda la fuliyay. Waan arki doonaa haddii ay jirto jawaab celin ka timid saaxiibkayaga.
Cabbiraad, Isku darka cabbiraadda aagga, masaafada, wareega, xagasha iyo mugga, waxay ku fekerayaan in loo sameyn karo si waxtar leh. Inkasta oo aynu dhamaanteen ka rajeyneyno in la soo koobo oo aan ku jirin khadka taliska; Hadday sidaas tahay, sifooyinka khadadka taxane ah waxay noqon doonaan miis aad u fudud oo loo diro Excel ... weli waxay u baahan tahay in la arko.
sooci, hadda waa suurtogal in la nadiifiyo walxaha qumman ee dhererka eber (maaha dhibcood), sidoo kale qoraalo aan ku jirin jilayaasha ... taasi waa fiicantahay, sababtoo ah nadiifinta faytolojigu waa waalan sababtoo ah qashinka noocan ah.
Macro-ficil, waxaad u habeyn kartaa habka qumman, oo laga yaabo in waxa la mid ah waxa ArcGIS loo yaqaan "geoprocessing", waa inaad isku daydaa.
Xajmiga Xajmiga Xaddiga ayaa la kordhiyay ugu yaraan 4 GB (iyadoo ku xiran qaabka nidaamkaaga), adoo bixinaya dabacsanaan dheeraad ah ... ?????? Fikrad ma aha waxa dhici doona.
Goobaha hore, doorbidka isticmaalaha ayaa la xiriirta goobta shaqada si toos ah. Waxaan fahamsanahay in marka uu qofku soo galo, isagu / iyadu dooran karo jawiga shaqada oo leh doorbidid muuqaal ah, cutubyo, gaabis, ucs, iwm.
Jihada dib u noqoshada, tani waa shaqeyn weyn, sheyga toosan ayaa lagu bedeli karaa dareenkiisa. Waqtigaan, hantidu waxay soo iibsadaa sidii la dhisay, laakiin suurtagal ma ahan in wax laga bedelo haddii aan laga soo qaadin jihada ka soo horjeeda ama dib loo habeeyay. Waa mid aad u macquul ah waddooyinka iyo saldhigyada gorgortan.
Nolosha ilbiriinka, hadda waxaa suurtagal ah in lagu beddelo bakhaarka godka. Xusuusnoow isku dhafka ka dhalan kara soo saarista aagga ama in lagu daro qaybin; ha, iyo haddii qof aan waxba galabsan uu sameeyo curvaha heerarka u adeegsanaya ... wuxuu ujoogay inuu dhinto.
Midabka lakabka, Hadda waxaa suurtagal ah in la baddalo midabka lakabyada iyadoo aan la furin guddi, si toos ah uga soo degta liiska.
Waxay u muuqataa in isbeddelku uusan noqon mid muhiim ah marka la eego waxa ay ku qoran tahay AutoCAD 2009, wax horumarin ah oo ka sii horeysay ma jiro, laakiin waa in aan xusuusanno in qaar badan oo ka mid ah astaamahan cusubi ay yihiin kuwo qiimo leh. Waa inaan qirto, in ay lagama maarmaan noqoto in la tijaabiyo version, si loo hubiyo in wixii aan ku fahannay xaashidan dhab ahaantii waa tan. Hadda, waa Qalal ayaa bilaabay ee waxaan ogaan doonaa inta ka hadhay sanadka sida AutoCAD Gator 2010.
Halkan waad soo dejisan kartaa tilmaan-bixiyaha cusub ee AutoCAD 2010.
Halkan waxaad arki kartaa fiidiyowyada muujinta hawlaha cusub.
Sidoo kale on Youtube waxaa jira fiidiyowyo qaar ka mid ah AutoCAD 2010 LT.
Post Previous«Previous Maareynta aqoonta, qaabka nidaamka
Post Next Live Writter, album photoNext »
3 jawaabta "Maxaa Cusub ee AutoCAD 2010"
Lázaro Santofimio isagu wuxuu leeyahay:
Galab wanaagsan, waxaan xiiseynayaa barashada sida loo isticmaalo qalabkan xooggan, mahadsanid.
leoncio isku dhacaan isagu wuxuu leeyahay:
Iportate waxaan jeclaan lahaa in aasaasiga ah sida loo xoojiyo arjigaan ku jira shucuurta injineernimada
Roberts Basaldúa Sulca isagu wuxuu leeyahay:
AutoCAD 2010 waxaa lagu fulin karaa guul weyn oo loogu talagalay Qorshaha Shirkadda Geological-ka ee Miino Underground, oo ku dhex taal Mining Incin, si loo qorsheeyo Qorshaha Geological-ka ee Mine waxaa lagu hormarin karaa waxtarka AUTODESK.
Geologist Roberts Basaldúa